श्रीमान् श्रीमतीबीच जति झगडा, उति माया गाढा
Homeबिबिधश्रीमान् श्रीमतीबीच जति झगडा, उति माया गाढा
August 22, 2020 kandai kanda 1 बिबिध
एजेन्सी । हप्तामा कम्तीमा एकपटक झगडा गर्ने श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध स्वस्थ र लामो समयसम्म टिक्ने हालैको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा ४४ प्रतिशत विवाहित जोडीको मान्यता छ ।
वास्तवमा, जो जोडीको शान्तिपूर्ण ढङ्गले लगातार विवाद भइरहन्छ उनीहरु लामो समयसम्म सम्बन्धमा रहने बताइएको छ ।
ब्राइट साइडले राम्रो सम्बन्धका लागि झगडा किन आवश्यक छ भनेर जानकारी दिएको छ ।
१. परिपक्व सम्बन्धको सूचक हो झगडाः
श्रीमान्–श्रीमतीबीच लामो सम्बन्ध चाहनुहुन्छ भने झगडा गर्नबाट नरोकिनुस् । यदि तपाईं विवादका बेला मनको कुरा खोल्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो सम्बन्धलाई अर्को चरणमा पुर्‍याउन कटिबद्ध हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
परिपक्व व्यक्तिले कहिले पनि पार्टनरमाथि हातपात गर्दैनन् न त चिच्याएर गाली नै गर्छन् । उनीहरु स्वस्थ तर्कसहित एउटा मध्यमार्ग स्थापित गरेर आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार्ने बाटोतिर लाग्छन् ।
२. झगडा गर्नु भनेको तपाईंलाई उहाँको चिन्ता छः
यदि तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरको कुनै बानी मनपर्दैन भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा नै स्थिती सहज हुने धेरैलाई लाग्ला । तर यदि तपाईं आफ्नो सबै पीडा, दुःख र असहजतालाई झगडामार्फत् राम्रो नतिजा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो तपाईंको साँचो मायाको प्रतिबिम्ब हो ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने झगडा गर्नेहरु प्रतिबद्ध हुन्छन् । एकपटक सम्झनुहोस् त, तपाईं आफ्नो आमाबुवा र दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग कति झगडा गर्नुहुन्छ । यही नीति पार्टनरमा पनि लागु हुन्छ । यदि तपाईं पार्टनरसँग झगडा गरिरहनुहुन्छ र कुरा सुल्झाउनुहुन्छ भने तपाईं निकै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।
३. झगडाले कुराकानीमा सहजीकरण गर्छः
आफ्नो सम्बन्धमा विश्वास कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं चुप बस्नुहुँदैन । दिमागलाई खुल्ला राखेर आफ्नो पार्टनरसँग कुराकानी गर्नुहोस् । आफूले गरेका प्रत्येक क्रियाकलापको जिम्मेवारी लिनुहोस् र पार्टनरको भनाई के हो, राम्रोसँग सुन्नुहोस् ।
संवादका धेरै प्रकारमध्ये विवाद पनि एक हो र विवाद निकै इमान्दारसमेत हुन्छ । यसले पार्टनरबीच अपनत्व र विश्वास स्थापित गर्न सहयोग गर्छ ।
४. झगडा भनेको स्वस्थ सम्बन्धको संकेत होः
मनोवैज्ञानिकका अनुसार स्वस्थ सम्बन्धका सात मुख्य कारक तत्व छन् र यीमध्ये बहस पनि एक हो । वास्तवमा, यदि कुनै जोडीको कहिले पनि विवाद भएको छैन भने उनीहरुबीच सबैकुरा राम्रो छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
जोडीलाई आफ्नो भावना र मान्यतामाथि पुनर्विचार गर्न विवादले सहयोग गर्छ । यद्यपि, तपाईंहरुको विवाद स्वस्थ हुनुपर्छ । यसमा हातपात हुनुहुँदैन, नाम काट्नु हुँदैन र ठूलो स्वरले झर्कनु हुँदैन ।
५. झगडाले तपाईंहरु बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछः
यदि तपाईं पार्टनरसँग झगडा गरिरहनुभएको छ भने त्यसमा तपाईंको जीत र हारको कुनै महत्व हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई अलि बढि चिन्नुभयो र त्योभन्दा महत्वपूर्ण तपाईंले आफैंले आफैंलाई पनि थप चिन्नुभयो ।
सानोतिनो झगडाले तपाईंहरुको वास्तविक स्वभाव दर्साउँछ । यदि तपाईंहरुले सँगै मिलेर चुनौतीको सामना गर्न जान्नुभयो भने तपाईं सम्झौता गर्न हिच्किचाउनुहुन्नँ जसले तपाईंको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ ।
६. झगडाले तपाईंको रिस नियन्त्रण गर्छः
सम्बन्धमा बस्नु त्यति सजिलो छैन । यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई केयर गर्नुहुन्छ भने तपाईंले सधैं आफ्नो सीमालाई लचिलो बनाउनुपर्छ । र यदि पार्टनरले तपाईंले झैं नसोचेको अवस्थामा तपाईंलाई रिस उठ्न सक्छ ।
केही महत्वपूर्ण कुरामा पार्टनरले सम्झौता गर्न नचाहेको खण्डमा तपाईंको रिस बढ्न सक्छ । यसैले सम्बन्धलाई चिसो बनाइरहेको हुन्छ ।
समस्यासँग जुध्नका लागि आफ्नो नकारात्मक सोचलाई दिमागबाट पखाल्नुहोस् ।
७. झगडा गर्नुको अर्थ तपाईंहरु धेरैजसो सँगै बस्नुहुन्छ
केही अनुसन्धानका अनुसार, सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको एकअर्कासँग टाढा रहनु हो । हामीलाई यसबारे थाहा हुन्छ तर मुख खोल्नुहुन्नँ । र जोडीबीच हुने कम संवादले सम्बन्धलाई टुटाउने काम गर्छ ।
तर तपाईंमध्ये धेरैलाई लाग्ला कि स–साना कुराको छलफलले सम्बन्धमा खासै असर पार्दैन । तर यो साँचो होइन । झगडाले तपाईंलाई समस्यामा केन्द्रीत हुन सहज गर्छ र यसले ठूलो रुप लिनु अघि नै सुल्झाउँछ ।
त्यसकारण जो जोडीबीच विवाद भइरहन्छ उनीहरु लामो समयसम्म साथमै रहन्छन् ।
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् भदौ ६ गते शनिबारको राशिफल
सगरमाथाको उचाइ कति ? घोषणा गर्न चीनसँग समन्वय हुँदै